नेपाली महिलाहरू अहिले पनि यौन रोगको उपचार गर्न जान किन हिचकिचाउँछन् ? | Rajmarga
वीरगन्जकी ४० वर्षीया फुलझरी देवीलाई लामो समयदेखि यौनजन्य रोगका लक्षण देखिएका थिए। उनको योनिबाट गनाउने पानी बग्थ्यो अनि तल्लो पेट पनि निकै दुख्थ्यो। तर लाजका कारण उनी लामो समय उपचार गर्न गइनन्।
त्यसपछि आफ्नो समस्याबारे उनले आफ्नी फुपूलाई भनिन् र उनकै सल्लाहमा चिकित्सकलाई परीक्षण गराइन्। “अहिले मैले उपचार सुरु गरेकी छु। बिस्तारै निको हुँदैछ,” फुलझरीले भनिन्।
यो समस्या उनको मात्र होइन। चिकित्सकहरूका अनुसार महिलाहरूमा यस प्रकारका समस्या बढी नै देखिन थालेको छ। “यस प्रकारको समस्या लिएर आउने महिलाको सङ्ख्या निकै धेरै छ। चाहे ती ग्रामीण भेगका हुन् वा सहरका,” स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डा आभा श्रेष्ठले भनिन्।
महिलाहरूमा कुन सरुवा यौन रोग सबैभन्दा बढी देखिन्छ त? श्रेष्ठ भन्छिन्, “सबैभन्दा धेरैमा देखिने समस्या चाहिँ क्लमिडियाको सङ्क्रमण हो। त्यसपछि गोनरिया अनि सिफिलिस (भिरिङ्गी) हो। यी सबै ब्याक्टेरियाबाट हुने सङ्क्रमण हुन्।”
तर अझै पनि देशका ग्रामीण र सहरी भेगमै पनि रोग लाग्नुभन्दा पनि त्यसलाई लुकाएर राख्नु अझ डरलाग्दो समस्याको रूपमा रहेको छ।समयमै उपचार गर्न आए यस प्रकारका रोग सजिलै निको हुन्छन्।
आखिर महिलाहरू किन यस्तो समस्या लुकाएर बस्छन् त? महिला स्वास्थ्यबारे कुरा उठाउने अधिकारकर्मी एवम् नर्स राधा पौडेल यसका पछाडि सामाजिक र आर्थिक कारणहरू भएको बताउँछिन्।
तर यस्तो रोग लाग्नुका कारण चाहिँ असुरक्षित यौन सम्पर्क, तथा पर्याप्त सरसफाइ गर्न नसक्नु नै रहेको चिकित्सकहरू बताउँछन्।
कहिलेकाहीँ गर्भपतन गर्दा प्रयोग भएका औजारबाट सङ्क्रमण भएको समेत भेटिएको उनीहरू बताउँछन्।
यस प्रकारका रोगबाट बच्न सुरक्षित यौन सम्पर्क गर्नु सबैभन्दा उचित हुने चिकित्सकहरूको भनाइ छ।
त्यस्तै यौनाङ्गको सरसफाइमा पनि ध्यान दिनुपर्ने उनीहरू सुझाव दिन्छन्।
स्वास्थ्यचौकी लगायतका धेरै स्थानमा सेवा दिन बसेका व्यक्ति पुरुष हुने भएका कारण पनि त्यहाँ गुप्ताङ्गमा देखापरेको समस्या लिएर जान महिलाहरू धक मान्ने गरेका छन्। प्रतीक्षा दुलाल/ बीबीसी नेपाली सेवा
Previous post: प्रजातन्त्र जीवनमरणको सवाल : देउवा
Next post: भारत-पाकिस्तान तनाव बढ्दा बाँकी विश्व किन चिन्तित हुन्छ ? यस्ता छन् कारण
के छ उपसभामुखको राजीनामा पत्रमा ? (पूर्णपाठ)